"Laksdzhin" brand yasungulwa ngo-2008, futhi imodeli kuqala ukuba yethulwa emakethe, kwaba evenini 7MPV. Okulandelayo Abaklami Taiwanese baye basungula wakha crossover, okuyinto hero lesi sihloko. Abasanda kujoyina uhlelo brand sedan Luxgen-5. Lokhu kumane nje kuyisiqalo loko, njengoba emabhizimisi ahulumende. Umenzi uhlose ukuthatha zonke niche market car - a kwesabelomali midget izimoto, izimoto zabantu abasesigabeni esiphakathi zaziba, kanye Limousines futhi ibhizinisi ekilasini. Le nkampani usebenza on ukuthuthukisa ngamazwe (noma ngisho global) nomthengisi inethiwekhi. Kukhona ngisho sigaba zenhlangano Luxgen 7 Suv eRussia. Ukuvelela sina anele saqala kule makethe.
Kodwa kungani? Kakade eziningi izinkampani bevela eTaiwan baye aphethwe esikhathini esifishane ukuba angagcini nje kubakhiqizi bendawo, kodwa lezi zidlakela sezizwe ezihlukahlukene. Ngokwesibonelo, Acer futhi Asus kukhona phakathi abahlinzeki ngobukhulu futhi abadume kunabo bonke imishini computer kanye izingxenye ezisele. Nokho, into eyodwa - kungcono ukwenza microprocessors, kuhlukile - ukwakha imoto ukuncintisana.
"Laksdzhin": Taiwan hhayi kuphela
Yebo, kule nqubo ukuthuthukiswa kwakungafanele onjiniyela abavela kwa-Taiwan kuphela. Iningi yonke imisebenzi ebaluleke kakhulu ku ukwakhiwa evenini nomkhiqizi Suv Luxgen 7 outsourced. Ngakho, chassis kwadalwa ochwepheshe yinkampani yaseCanada Magna. izinjini Turbocharged ezakhiwa ngokuhlanganyela isiFulentshi, futhi emihle-silungisa chassis waseBritish wahlanganyela Provede.
imininingwane abaningi yezingxenye netindlela encenga phakathi nalezo isisungule ngempumelelo uhlobo esezingeni imoto. Ngakho, a ophephela atholakala kweyesi Garret. 5-speed automatic transmission oda Aisin. Le nkampani ikholelwa ukuthi izingxenye eside lukhona futhi izingxenye ngeke ahluleke, futhi uma kwenzeka lokho, angase kalula kwalungisa - ube nolwazi olufanele kanye izingxenye ezisele.
Kodwa sekuyisikhathi ukuya Ukubuyekeza imoto. Ukutadisha abanikazi 7 Izibuyekezo Luxgen le Suv, yona eyaqala ukwenza i avele inthanethi yezimoto kanye izinkundla, ungabona ukuthi lokhu imodeli ngempela ezithakazelisayo.
Ngokuvamile, ukubukeka kuyinto ngempela ehlukile ngisho zilinganiswa nguye. Kulesi umshini akukho eyabeka wakhe ukuthi ivelaphi. Futhi lesi sitayela ikuphi phambi eliye lasetshenziswa cha. Zonke zibopheke ukulinganisela ncamashi, konke lapho kufanele. Ikakhulukazi, kubalulekile ukuba acabangele design ayizange Asians, futhi ochwepheshe kusukela eziningi design studio owaziwa IntalDesign. Esikhathini studio efanayo sadalwa umzimba ngezimoto amaningi aseYurophu.
Imele phambi Izinsimbi esime a trapezoid. It is zihlukaniswa luhlaka-chrome. Futhi phezu phambi izibani ephakeme ngokungajwayelekile yenkungu ujike isignali emapheshana ku emaphethelweni bumper. Uma abanikazi funda ukubuyekezwa (Luxgen 7 SUV), lo mehluko, enikezwe crossover ungabahlukanisa kusukela grey isixuku izimoto.
Ngemuva emzimbeni kwafika mincanyana futhi sibe nesizotha. Lapha konke evumelana nemithetho somklamo. Imoto kwaba smooth kakhulu futhi mncane, kodwa ukuthobeka lapha - ke yinto enhle.
Ngu Ubukhulu jikelele nezinye crossovers umzimba izici aphakeme lapho Avtosrtoiteley kusuka Taiwan zibalwa Totota RAV4 futhi Hyuindai Santa-Fe. Ubude umzimba 4800 mm umhlathi. Ububanzi kuyinto 1930 mm. Ngaphezu kwalokho, umshini libhekene wheelbase ezinzima. Ubude bayo 2910 mm. Lesi sibalo baningi ngisho nangaphezu kwezinwele Touareg futhi ngaphansi kuka-5 mm, ngaphandle Mercedes M-Class. Kodwa akunjalo nezinezingadi umxhwele Ubukhulu zangaphandle endlwaneni eyakhiwe, njengoba singathanda.
Ngaphakathi, konke kwenziwa ngothando. Kuyacaca ukuthi abaklami nabathungi abafuna ukujabulisa ikhasimende cishe yonke into. Behleli kusofa, ngisho noma esihlalweni esehlehlisa kude, uyaqaphela ukuthi kukhona isikhala esanele kahle uqondanisa izinyawo zakho. Kodwa nakhu uma champagne phakathi emihlane esihlalweni phambi irowu nezinyawo behlala ndawonye bengashadile akusashiwo ukuletha. Phansi uyisicaba, bendabuko Umhubhe emaphakathi lapho - ngemuva engalingana ngisho abagibeli abathathu, nakuba kukhona okuncane enyinyekile.
isihlalo yokushayela ukhululekile kakhulu, isihlalo nokunwebeka ngokulinganisela, kodwa kancane ezinzima. ukwesekwa Lateral kuyinto kanye nenani kwanele wakhe bakwazi ukukhuluma ngaphandle amahlaya. Ukuhlaziya abanikazi 7 Izibuyekezo Luxgen le Suv, singaphetha ngokuthi ngemva zonke ezinye lokhu kusekelwa akwanele. Njengoba imishini, isitulo has a Ukushisa ukupholisa uhlelo.
Phakathi bokwenza kwesitulo - zihlalo okusezingeni eliphezulu. Ukuze abashayeli ubude kuyoba nzima kakhulu ukuthola ke okuqondile. Umqhele uzobe propping phezulu ophahleni. Kalula futhi ukhululekile ukugoqwa futhi behluleka - kunzima ukufinyelela nemigoqo, ngoba ukulungiswa, kodwa kuphela ukuphakama. Kodwa sekuyisikhathi eside onobuhle eziningi crossover yesimanje nginqobe lezi zinkinga. Kwabaningi kunomuzwa ukuthi imoto Luxgen 7 Suv yadalelwa Asians, futhi kungukuthi aziwayo ukuthi ukukhula okusezingeni eliphezulu.
I yokuntula nazo kude ukuphumula Izilawuli amafasitela. Ukuze uvule iwindi, isandla kufanele Arch ngendlela ephambene neyemvelo. Amasondo ayo ifakwe ezihlukahlukene izinkinobho kanye evuthayo, kodwa akenzanga kube lula - usebe kakhulu mncane futhi base wenziwe plastic kanzima kakhulu. Kepha izinto kokuqeda, esihlalweni futhi phezulu iminyango ahlotshiswe lesikhumba (lokufuna ukunethezeka). Kodwa nansi inhlanganisela isikhumba nge plastic phambi iphaneli elula ubukeka kabi.
Amajaji insimbi kanye electronics
Amajaji sensimbi sinephutha ibhadalele osabalalayo, kuba mhlophe, futhi kunzima ukuba ngiziqonde, kodwa ukufunda Kusengenzeka. Ngaphezu kwalokho, njengoba inketho ukuhlomisa projection sesikrini esitholakalayo, offset kwesobunxele. Image naye slide ifilimu okhethekile banamathela ingilazi. Umxhwele, kodwa kakhulu kancane, uma kubhekwa ukuthi Luxgen 7 intengo Suv eRussia ruble ayizigidi 750. Lona Izindleko umshini njengoba standard. Ukulungiselelwa ephezulu ekupheleni "Zenzele Igama" kuyabiza nakakhulu Luxgen 7 Suv. intengo imoto kuyoba abangaba yisigidi.
Umhubhe phakathi umshayeli futhi abagibeli lihlotshiswe isigwedlo automatic transmission, kanye eziningi izinkinobho ezilawula electronics. KuArmrest kuyinto USB, nevidiyo isokhethi okokufaka at 220 V
Ngo iphaneli emaphakathi nemizimba ekulawuleni isimo sezulu kanye yesimanje uhlelo ukuzijabulisa. Futhi ibekwe console elikhulu-10 intshi ukubonisa. multimedia uhlelo lokuhambisa is ifakwe ukusebenza kakhulu izakhiwo zesimanje. Kukhona okufakwayo kwevidiyo lapho ungakwazi ukuxhuma smartphone yakho. Phatha bonke lokhu sisenza nge izinkinobho amasondo ayo. Okokuqala akulula kanjalo, ngakho-ke, kungase kudingeke uthole futhi batadishe Imanuwali nokusebenza kanye nokugcinwa. Kufanele futhi ishiwo uhlelo losizo ukuthola umshayeli. Ngokusho azungezwe we zomzimba ziyinkimbinkimbi ngendlela 8 amakhamera. ukubonakala Round is run ngesivinini amakhilomitha ngehora 20. Isikrini okuvezwa konke ezungeze imoto ngaphakathi endaweni engaba 2 amamitha. Futhi esikrinini ungabona isithombe kusuka ikhamera ngalinye ngokuhlukile. Ngisho lapha uhlelo lusebenza izimoto ukuthola e zone izimpumputhe ngenkathi ushayela. Ngemva baphendukela umshayeli blinker, isibonisi sizobonisa umfanekiso ikhamera okuhambisanayo. Lesi sithombe okukhipha nge ukubambezeleka, ngakho lesi sici asikho ewusizo kakhulu.
Imishini inohlelo embonweni wasebusuku ngekhamera ekhethekile. It ikuvumela ukwandisa ebusuku ukubonakala kuze kube ngamamitha angu-100. Ngaphezu umnikazi kohlelo inkonzo umgwaqo wokugubha ukuqashelwa.
Yena nasisindo, kodwa ayikwazanga ukudlula
Yilokho wazibonakalisa crossover Luxgen 7 Suv. Sekukonke, ikhwalithi Ukugibela akuyona inkinga, kodvwa akakhiphanga ukushayela ubumnandi, njengabanye onobuhle efanayo.
Umshini ifakwe iyunithi Turbo ephethe umthamo ukusebenza 2.2 amalitha. Amandla akhe 176 hp. Le nkampani eyenza ukuqhathanisa sayo V6. Kodwa kungakenzeki lokho, injini asemkhathini ukulukhukhula. Ngezinye izikhathi Phiko kancane ukuze ngizigcine nginolwazi oluhle ngezinto umshayeli. Ngokwesibonelo, uma ucindezela namafutha imoto akasabeli ngokushesha. ukulungisa kanye namasistimu okusebenza imiyalelo isihloko alisho ukuthi noma yini entsha, futhi abanikazi ukuphinda ngazwi linye mayelana nokusebenza ezibuthakathaka iyunithi.
Motor is zalala-5-gearbox okuzenzakalelayo kusukela Aisin Japanese. Kuyadingeka ukuthi injini kanye ne-transmission zivumelana ephelele. Ibhokisi akuyona babanjwa kwamagiya futhi sekuqalile kuphela uma sidingeka. Lokhu ukudluliswa oluhambelana kukhona algorithm eziningana ukuthi bayakwazi ukuzivumelanisa umshayeli.
Luxgen 7 Suv: ukusebenza ukushayela test
cornering zithathelwe booster ngalokwanele detuned. isondo Uninformative ayo, kodwa vibration okuhambisa kahle. Kodwa kubalandeli ukushayela kakhulu imoto ngeke zisebenze.
Ukumiswa aminyene ngokwanele, amabhange zimbalwa futhi ziyantula. Imoto ubhekana imithwalo ezilingene ubelokhu indlela. On a flat komgwaqo imoto ngemoto kahle. Kodwa uma asphalt liphenduka off-road, kwezwakala chassis eqinile.
On semfene "Laksdzhin" iyaphendula kunyakaza wonke umzimba nokudludliza lubonakale ku amasondo ayo. On izimbobo ezinkulu dampers ocushiwe ngejubane. Isizathu sokuthi kungani imisiwe ezingemuva namanye amavesi encane. On isondo amatshe ngokoqobo ukudansela isiginci sakhe ezandleni zakhe. On the off-road amakhono ungenziwa kuphela khuluma kunemibandela. I imvume phansi 155 mm, futhi kuyacaca ukuthi akwanele lokhu kakhulu. Ukuhamba usebenza izindlela ezintathu (phambili, nibulale ezingasemuva, connectable esigcwele-eksisi). In the mode yokugcina, torque ihlukaniseke ngokulinganayo kuzo zonke izimbazo.
Le moto ukhumbuza umklami izingane, lapho izingxenye ezahlukene kukhona okuxubile, kodwa kunzima zihlangane. Ngenxa imvume phansi kuyinto crossover ngegama kuphela.
Multifunction multimedia aluhlanganiswa ongaphakeme-ukulungiswa kwesikrini. Kuye esikrinini ukucushwa kungenzeka resistive, futhi kuphakathi ningathinti. Abanikezeli zonke izingxenye - brand eyaziwa, kodwa ukuhlanganisa zonke izinto ngokuvumelana nganoma "Laksdzhin" kuhlulekile. Izibuyekezo abanikazi Luxgen 7 Suv ukuqinisekisa ngokugcwele lokhu.
Ngakho sasisuke ukuthi yini le moto ine izici lobuchwepheshe, umklamo kanye nentengo. Siyethemba ukwaziswa okwaba usizo!
DVR ParkCity DVR HD 460: Uhlolojikelele, imiyalelo yokufaka, ukubuyekezwa
Sagittarians female. isici uphawu